Alaab -qeybiyaha isku xirka Shiinaha Flange iyo Warshadda | Zhaofeng
Faa'iidooyinka ku rakiban tuubbooyinka FRP:
1. Waxay leedahay sifooyin jidheed oo aad u fiican waana insulator kulayl iyo koronto oo wanaagsan;
2. Iska caabinta daxalka kiimikada, cimriga dheer ee adeegga, FRP waxay ilaalisaa dusha siman ee tuubada cusub;
3. Qiimaha rakibidda iyo dayactirka oo hooseeya, taas oo yarayn doonta kharashka rakibidda iyo dayactirka;
4. Dabacsanaanta naqshadeynta weyn iyo muddada wax ka beddelka gaaban.
Injineernimada degmada-injineernimada sahayda biyaha, injineernimada dheecaanka, injineernimada biyaha roobka;
Warshadda korontada-korontada ee wareejisa biyaha, wasakhaynta warshadda korontada;
Tubada ilaalinta isgaarsiinta-kabka;
Dhuunta saliidda Petrochemical-saliidda ee ceelasha biyaha, mashaariic gaadiid dhexdhexaad ah oo dareere ah oo daxalaystay;
Beeraha, keymaha iyo ilaalinta biyaha-beeraha, kaymaha iyo waraabka dhawrista biyaha;
Beeraha kale ee gaadiidka dhexdhexaadka ah ee dareeraha ah.
Astaamaha wax -qabadka ee ku -rakibidda tuubooyinka FRP:
1. Ku rakibidda tuubooyinka FRP waxay leeyihiin sifooyin jidheed oo aad u fiican, cufnaanta gaarka ah ee tuubada FRP waa 1.8-2.1, xoog sare, miisaanka dhuumaha FRP waa iftiin, sifooyinka jirka iyo farsamada ayaa aad u fiican. Intaa waxaa dheer, is -weydaarsiga ballaarinta ee tubbada FRP wuxuu qiyaas ahaan u dhigmaa kan birta, iyo kuleylka kuleylku wuu hooseeyaa. Qalabka kuleylka iyo korontada oo wanaagsan.
2. Ku rakibida biibiile biraha dhalada ah waxay u adkaysan karaan daxalka kiimikada waxayna leeyihiin adeeg cimri dheer, waxayna ku habboon yihiin gudbinta asiidhyada kala duwan, alkalis, cusbada iyo dareeraha dareeraha ah iyo warbaahinta kale ee kala duwan.
3. Astaamaha Haydarooliga ee ku rakiban tuubooyinka FRP waa kuwo aad u fiican, taas oo ah mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee tuubada FRP. Astaamaha Haydarooliga ee aadka u fiican waxay ka dhigan tahay in luminta madaxa dareeraha ay yar tahay, iyo dhexroor tuubo yar ama bamka gaarsiinta awoodda hoose ayaa la dooran karaa, taas oo yareyneysa maalgashiga bilowga ah ee injineernimada dhuumaha, badbaadinta awoodda iyo yareynta kharashaadka hawlgalka. Dusha sare ee FRP waa mid siman. Guud ahaan, xajmiga dushiisu wuxuu noqon karaa 0.008, kaas oo ku dhawaad ​​loo arki karo inuu yahay “tuubbo siman oo biyo -mareen ah”. Inta lagu jiro hawlgalka, dusha gudaha ee biibiilaha birta ah, tuubada birta ah ee la tuuro, tuubada sibidhka, iwm badiyaa waxay maraan daxalka deegaanka waxayna noqotaa mid aad iyo aad u qallafsan, halka fiilada galaaska ah ee la xoojiyay ay had iyo jeer ilaaliso dusha siman ee tuubada cusub.
4. Qiimaha rakibidda iyo dayactirka ee rakibidda tuubooyinka FRP waa mid hooseeya. Guud ahaan marka la hadlayo, tuubooyinka FRP uma baahna daaweyn gaar ah oo ka hortagga daxalka; lakabka dahaarka ayaa la khafiifin karaa iyada oo aan la helin daaweyn daboolid dheeri ah; dhuumaha dhumucdiisu aad bay u yar tahay, qalabka qaadista tonnage -ku waa yar yahay, isticmaalka korontaduna wuu yar yahay.
5. Dabacsanaanta naqshadaynta ee ku rakiban biibiile biraha dhalada ah ayaa weyn, wareegga wax -ka -beddelkuna waa gaaban yahay. FRP waxay ka samaysan tahay fiber la xoojiyay oo lagu dahaadhay shay cusbi ah, lakabka dhaawaca oo lakab ku dul saaran caaryada asaasiga ah iyadoo la raacayo xaaladaha geedi socodka gaarka ah oo si habboon loo bogsaday. Darbiga tuubada waa qaab -dhismeed, kaas oo lagu beddeli karo iyadoo la beddelo nidaamka xabagta ama la adeegsado qalabka xoojinta ee kala duwan ayaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo sifooyinka jirka iyo kiimikada kala duwan ee tuubooyinka FRP si loola qabsado warbaahinta kala duwan iyo xaaladaha shaqada si loo sameeyo tuubooyinka FRP oo leh heerar kala duwan oo cadaadis ama leh hanti gaar ah oo gaar ah. Xilliga wax-ka-beddelka gaaban waa sifo cajiib ah oo ka kooban walxaha isku-dhafan ee fiber-ka, kuwaas oo aan la barbar dhigi karin tuubooyinka biraha isotropic.
Hore: Flange dabacsan
Xiga: Taangiga kaydinta biyaha ee FRP ultrapure